देशको आईजीपी बनाउने सरकारले कि बिचौलिया खरिदारले हो प्रधानमन्त्री ज्यू ? - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
देशको आईजीपी बनाउने सरकारले कि बिचौलिया खरिदारले हो प्रधानमन्त्री ज्यू ?
29 March, 2018 12:09 pm
करिब डेढ महिना पहिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भए लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिचौलियाका माध्यमबाट कुनै पनि काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यति मात्रै होईन प्रधानमन्त्री ओलीले बिचौलियाको रुपमा फाइल बोकेर आफ्नो छेउछाउमा नआउन समेत बिचौलियाहरुलाई चेतावनी दिएका थिए ।
तर, यतिबेला खरिदार पदबाट जागिर छाडेका एक जना बिचौलिया प्रधानमन्त्री ओलीको भित्रिया भएको दाबी गर्दै यो मूलुकको संबैधानिक पदहरुमा आफूले चाहेको मानिस नियुक्त गर्न सक्ने फूँई लगाउदै हिँडिरहेका छन् । काभ्रे जिल्ला स्थाई घर भएका पूर्व खरिदार दिपक तिमल्सिनाको यतिबेला चुरिफुरी हेरिनसक्नुको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा समेत आफ्नो रवाफको धक्कु लगाउदै हिँड्ने तिमल्सिनाले अहिले आफूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको ‘बिजनेश’ पाटर्नरको रुपमा परिचय गराउने गर्छन् । नाताले प्रधानमन्त्री ओलीको सालाका छोरा पर्ने स्वकीय सचिव राजेश शाक्य मार्फत ओलीको किचनसम्मै आफ्नो हैसियत रहेको तिमल्सिनाले बताउने गर्छन् ।
उनी यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली मार्फत आफूले मुख्य दुईवटा मिसन पूरा गर्न लागेको खुलेआम भन्दै हिडिरहका छन् । उनले अख्तियार प्रमूखदेखि नेपाल प्रहरीको आईजीपी आफ्नै सल्लाह बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले नियुक्त गर्ने समेत बताउदै छन् । त्यति मात्रै होईन तिमल्सिनाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तथा सभामुख समेत रहेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई भेटेर कार्यबाहक अख्तियार प्रमुख नविन घिमिरेलाई प्रमुख बनाउन लबिङ गरिरहेको बताउने गरेका छन् ।
उनले उपेन्द्र महतोसँग पनि आफ्नो दैनिक जसो उठबस भैरहने फूर्ति समेत लगाउने गरेका छन् । अहिले नेपाल प्रहरीको आईजीपी बनाउने बहस तिब्र भैरहेको छ । आईजीपीका लागि तीन जनाको नाममा निकै चर्चा–परिचर्चा भैरहेको छ । यी तीन नाम मध्ये तिमल्सिनाले आफूले लबिङ गरे अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीे पनि आईजीपी बनाउन तयार रहेको उल्लेख गर्ने गरेका छन् । यदि यो कुरालाई साँचो ठान्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री हँुदा बोलेका आफ्नै कुरा खण्डन गरेको देखिन्छ । होईन भने खुलेआम बिचौलियाको भूमिकामा चलखेल गर्दै हिँड्ने तिमल्सिनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले कारबाहीको दायारामा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
त्यति मात्रै होईन अघिल्लो सरकारले आइजीपी नियुक्त गर्दा जुन कुराको कारण अलोकप्रियता कमायो यो सरकारले पनि त्यही बाटो रोज्ने धृष्टता पक्कै गर्नेछैन । साथै निकै भताभुङ्ग तथा जीर्ण तरिकाले गुज्रिरहेको प्रहरी संगठनमा कुशल नेतृत्व चयन गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनु हुदैन । त्यति मात्रै होईन प्रधानमन्त्रीको नाम र पावरको दुरुपयोग गर्दै हिँड्ने तिमल्सिनालाई यथाशिघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
होइन भने प्रधानमन्त्री ओली पनि आलोचनाको शिकार हुनुपर्ने निश्चित छ । त्यति मात्रै होईन आफ्नो रवाफको धक्कु लगाउदै हिँड्ने तिाल्सिना पहिलेदेखिका नामुद बिचौलिया भएको समेत छताछुल्ल भएको छ । केही समय पहिले आर्मी अफिसर्स क्लबमा कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको छोराको बिहेको पार्टी थियो । पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत जाँडले मातेका थिए । जाँडले मातेका पूर्व प्रहरी प्रमुख अर्यालले मुरमुर्रिदै दिपक तिमल्सिनालाई तल्लोस्तरको शब्द प्रयोग गरेका थिए ।
उनले दिपकको नाममा मुख छाड्दै आफूलाई अख्तियार प्रमुख दिप बस्न्यातको च्याम्बरमा पुर्याएर उनीसँग ५० लाखको डिल गराईदिएको बताएको स्रोतको दाबी छ । तिमल्सिनाले ओली, देउवा र प्रचण्डलाई मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी समेत आफूलाई रहेको र उनीहरु तीनै जना आफ्नो ब्यापारिक पाटर्नर भएको रवाफ समेत देखाउने गर्छन् । उनले एनसेल प्रकरण मिलाउन तत्कालिन प्रधान्यायाधीशलाई रसियामा तथा आरजु देउवालाई सिंगापुरमा पुगेर पैसा दिएको बताउने गरेको स्रोतले जानकारी गरायो ।
अहिले उनले प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव शाक्य मार्फत अख्तियारमा कसलाई प्रमुख बनाउने र कसलाई राजदुत नियुक्त गर्ने भन्ने सेटिङ मिलाएको बताउदै हिँड्ने गरेका छन् । उनले राजेश मार्फत आफूलाई सबैतिर मिलाउने जिम्मेवारी मिलाईएको बताउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली एउटा खरिदारको जागिर छाडेर बिचौलिया खेलाडीको सल्लाह मानेर संवैधानिक नियुक्ति गर्न अग्रसर होलान या आफ्नै तरिकाले विधि विधानमा बसेर नियुक्त गर्लान त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।